Alla Kala Fogaa! |
Alla Kala Fogaa!
Hargeisa(GNN):-Magaciisa wanaagsani waa Rashiid, laakiin wuxuu uga dhego-nugul yahay oo loogu yeedhaa Tuke oo ah naanays uu ku caano-maalay. Joogiisu wuxuu u dhexeeyaa dherer iyo gaabni. Midabkiisu waa madow dugul ah oo dhalaal weheliyo. Timihiisu waa buuxaan oo sida rag badan oo aynigiisa ah oo qurba-joog ah haleeshay, weli kama daadan. Waa Afartan jir jidhkiisu buuxo, laxaadkiisuu u dhan yahay oo aan kala dhantaalayn, muruqyada goostay oo markaad aragto qaab-dhismeedkiisa aad xasuusanayso feedhyahaynkii Mike Tyson ee wacdarihiisu dunida ka yaabin jireen, maalmihii xidigiisu noollaa. Waa hadal yaqaan haasaawaha godkiisa hela oo intiisa codkar ku ah.
Dadka qaar baa tusmada weedha ay odhanayaan ku rafta oo hadalka calaaliya balse Tuke, carrab toosan oon muruq dalab u yeelaa wehelin ayaa Eebbe ku galaday. Meesha uu ka sheekaynayo way adag tahay in cid kale la dhegaysto, xitaa haduu iska aamuso waxa kelifa asxaabtiisa oo aad uga hela mudaakirooyinkiisa.
Madadaalo, maad, kaftan, jareexo, dacaayad, run iyo been midna kama madhna sheekooyinkiisa. Hadalku wuxuu u baahan yahay Hu’ oo kuma fiicna qaawanaanta, sida dadkuba aanay ugu wanaagsanayn. Si kale hadaan u dhignana waxaan odhan karnaa; hadalku markuu qaawan yahay ee Hu’ga laga saaro wuxuu la mid yahay qof qaawan. Sida Soortaba marka la karinayo loogu daro dhiro badan oo macaanka dhadhankeeda kor u qaada, ayaa hadalkuna u leeyahay Xawaash iyo Hayl dhegta ku khasba inay dhegaysato, daawato ama akhrisato. sidaa darteed Tuke maaha nin hadalka marada ka siiba. Wuxuu isticmaalaa tiraab asturan oo luqada tayadeeda muujisa.
Inkasta oo labeenta luqaddu tahay suugaanta, hadana, Tuke maaha Af-maal Tix curiya, hase ahaatee wuxuu leeyahay hibo kale oo farshaxan oo taa la hayb ah. dabcan, qof kastaaba ma awoodo inuu yeelo sidaas, laakiin kii Eebbe siiyo hibadaas ayaa kara.
Wuxuu leeyahay dhegaystayaal badan oo sida Soomaalidu u sugto idaacadaha galbeedka ee BBC iyo VOA u dhawra imaatinkiisa. mar mar iyo dhif danihiisu meel kale u leexshaan mooyaane, inta badan galabtii waxa u caado ah inuu tago Makhaayad shaaha laga cabo oo ay asxaabtiisa ku wada caweeyaan.
Waayaha aduun waa wacaal badan oo tabco iyo taag baa mar kasta isku maran, guusha iyo guul-daraduna waa is hareer socdaan, aadamuhuna faallada iyo falaynqaynta nolosha kama daalo, hadba wixii taagan ka warankeedana qofba meel buu ka abaaraa oo hadalkana la kala odhan og, Ilaahayna la kala baryi og. Soomaaliduna meelna kuma kala maqna ismana ogola.
Taariikhdu waa 29.june.2010, goobtuna waa badhtamaha magaalada Oslo. si fiican ayaa loo soo camiray masraxii makhaayada oo Tuke jillaaga koowaad ka ahaa. Galabtaa waxa loogu urursanaa si ka wayn sidii hore. sidii dumar taraaraystay(ducaysanaya) oo Sitaad tumanaya, jibbo-na meel ay marayaan aan is ogayn ayaa muuqaalku u ekaa. Qofkii kale ee jabaq hadal ka soo yeedho, mar keliyaa afka lagaga wada boodayay. Siday sheekada Tuke u dhegaysanayaan waxaad moodaa, bukaan sayloon ku socdo oon nuuxsi loo ogolayn.
Afkiisa ayuun baa sidaa loo wada eegayay. Wuxuu ku bilaabay sheekada maalintaa, ” Saaxiibayaal xalay waan riyooday. mid fariin fiican xambaarsan bay ahayd. riyadaasi waxay i tidhi, Rashiidow tagooggaaga waxa ku jira wiilkii Soomaali dhibta haysata ka saari lahaa. inkasta oo uu war farxad leh yahay, hadana Anigu waan ka naxay. sidaa aawadeed, waxaan go’aansaday wiilkaasi in aanuu dhalanin. si ay taasi iigu suura-gashana waxaan goostay in aanan guursan.”
Mid huuhaa u qaatay oo qosol ku dhaafay, mid in ujeedo ka danbayso fahmay oo gunaanadka dhawraya, ninba dhan uu ka ursadayba cabaar baa guux iyo hadal googoos ah lays dhex waday. intaas kadibna waxa hadalkii qaatay Kurtin oo laftiisu nin hadal yaqaana ah. Wuxuu yidhi; «Tukow horta ku jirabi mayno oo khayaalkaagan meel kale ula kici maayo, balse sadex hal baan ku leeyahay. midi waa iga jawaab, midna waa iga ilaaq, midna waa iga su’aal. midi waa iga jawaaboo, waxaad noo sheegtay inaad tahay xaasid aan jeclayn inay umaddiisu dhibta ka baxdo. midna waa iga ilaaqoo, ka tagooggaaga ku jira ee aad sheegayso kii Soomaali dhibta ka saarayay Ilaahayba kama dhigo. waxse iga su’aal ah, maxaa kugu keliftay inaad sidaa yeesho”.
Tuke lama habsaamin jawaabtii ee markiiba wuxuu la wareegay hadalkii waxaanuu yidhi; ” Kurtinow, walaal horta xaasid ma ihi, dadkayga iyo dalkayguna in ay dhibta ka baxaan anigaa jecel, hase yeeshee sidan aynu nahay maaha sidaynu dhibta kaga baxaynay, waayo in yar baynu danteenii ku daawanaynaa. Markaa intaynu sidan nahay waxaan ka baqayaa wiilka taggoogayga ku jiraa hadduu dhasho, in aan qaan gaadhba lala sugin, sidaa darteed, intii lagu qarxi lahaa ama isaga cid lagu qarxin lahaa, in aanuu dhalan baan ka door biday”. Maalmo ka hor maalintaa waxa magaalada Muqdisho ka dhacay dhacdo aad looga naxay oo lagu xasuuqay dhalinyaro ka qalin jebisay jaamacad. Wuxuu ahaa fal argagax wayn geliyay qof kasta, laga damqaday, xusuustiisuna ay la sii noollaan doonto soomaalida. Sidaa darteed, Tuke wuxuu sogordoh iyo sifayn ka bixinayay uun dhibaatada soomaalida haysataa heerka ay gaadhsiisan tahay.
Sidii haasaawahaasi u socday ayaa waxa makhaayadii asxaabtu fadhiday, soo hor maray, Ey koran, bidhaantiisu ku soo jiidanayso, quruxda dhogortiisa aad yaabto, xannaano iyo daryeel ka muuqdo, lagu tabcay oo korkiisa in washakh yari gaadho laga ilaalinayo. daryeel caafimaad iyo dhaymo haysta. buuggaag xambaarsan oo iskuul ka soo rawaxay. Ku sii jeedda hoygiisii, garanaaya jidka uu marayo. markuu hoygiisa gaadho loo maydhayo, Tuwaal qaaliya qoyaanka biyaha lagaga masaxayo. shaqadii uu qaban lahaa markuu iskuulka dhameeyo loo sii diyaariyay. adeega guriga dhiniciisa ka galaya. wixii loo diraba qabanaya. amarka la siiyo sidiisa u fulinaya……cajab…
Kaasi Arday buu ahaayee, Ey kalaa isla jidkii soo maray. kani waa shaqaale, iskuulkii dhameeyay, mushahar qaata oo waajibkiisa gudanaya. Wuxuu ku guda jiray hawl maalmeedkiisii. wuxuu hagayay nin indhoole ah oo uu u shaqeeyo. Waa dabiici xayawaanka intii isku hayb ahiba inay isku soo leexdaan oo isa salaamaan markay is arkaan. Eydana waxa lagu tilmaamaa isir aad isu jecel, oo aan is dhaafin markay iska hor yimaadaan. Laakiin markay shaqaynayaan intay isku soo leexdaan isma ursadaan, ee sida dadkay isu gacan haadiyaan. Gacan haadintoodu waa cod, wah, wah, wah, intay isugu jawaabaan ayay is dhaafaan. Sidaa aawadeed, Ey-gani hawl buu ku jiray, wuxuu gashanaa shaadh ay dushiisa ku qoran tahay; weedh af norwey ah oo macnaheedu noqonayo, « i faham, waan shaqaynayaa”. Markaa intuu halkaa uga dhawaaqay Ey kale oo ay iska hor yimaadeen ayuu dhaafay oo uu hawshiisii sii watay.
Waa laba sawir oo aad u kala durugsan. Dheehashadoodu tusmaynayso heerka dadka aduunka maanta ku nooli kala taagan yihiin. Bal qiyaasa labadaa, alla kala fogaa!